एकाबिहानै ओलीलाई आपत, माधव ओलीको सबै गोप्य भेट पर्दाफाश। – Halkhabar kura
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:३७
एकाबिहानै ओलीलाई आपत, माधव ओलीको सबै गोप्य भेट पर्दाफाश।
जेठ २० बिहिबार
एकाबिहानै नेकपा एमालेमा नाटक सुरु भएको छ।
ओली एकाएक गलेका छन् भने माधव नेपालले पनि खतरनाक चाल चलेका छन्।
हेर्नुहोस यो भिडीयो र पुरै हेर्नुहोस किनकि हामि नेकपा एमाले भित्रको घटनाको पुरै चिरफार नै गर्नेछौं।
विगत केहि समयदेखि हामीले देखिरहेको नाटक मंचनभन्दा यो अहिलेको नाटक झनै अचम्मको छ।
हिजो भर्खरै ओली लत्रिएर माधव पक्षका नेताहरुसंग छलफल गरे। हिजो अवेरसम्म भएको संवादमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट सहभागी थिए।
माधव नेपाल समूहले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिइ आफुहरु आइन्दा पार्टिको हित विपरित नजाने वचन समेत दिने हो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी ससर्त ब्युँताउन तयार भएका थिए।
पछि एकाएक ओलीले वचन फेरे र भने माधव नेपाल विना यदि एकता सम्भव हुन्छ भने म तयार छु। तर, यतिले मात्र रोकिएन। उता माधव पक्ष पनि के कम ? उनले यो खबर पाउनासाथ हत्त न पत्त एमाले नेताहरुको बैठक नै बोलाईदिए। उनले बैठक बोलाएको कुरा जब ओली पक्षले थाह्य पायो ,एकाबिहानै ओलीले फोन गरेर आफ्ना नजिकका बफादार नेता शेरबहादुर तामाङ्गलाई भनेर विज्ञप्ति निकाल्न लगाए।
आज बिहानै निकालिएको बिज्ञप्तिमा नेकपा एमालेले नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुन केन्द्रीय सदस्यलाई भनेको छ ।
खनाल- नेपाल पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठक ११ बिहान ११ बजेदेखि बसिरहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भईरहेको छ।
हेर्नुहोस त विधि र विधान। उता पार्टिले कारवाही गर्ने अनि यता पार्टीले कारवाही गरेका खनाल नेपालले एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने। यसले ओलीलाई निक्कै अप्ठेरो परेको छ। पार्टिमा म मात्र जान्ने हूँ र म मात्र ठुलो हूँ भन्ने प्रवृतिका ओलीलाई माधव र झलनाथ पक्षले बैठक बोलाएर टक्कर दिन खोजेका छन् भने, ओली पक्षले त्यहाँ नजानु र गएको खण्डमा नराम्रो हुने चेतावनी समेत दीईएको छ। यस्तो छ बिज्ञप्ति :
‘अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने नेकपा (एमाले) को वैधानिक व्यवस्था विपरित पार्टीले कारवाही गरेका अनधिकृत व्यक्तिले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ त्यस्तो कृयाकलापको निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछु,’
काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका खनाल, नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासित गरिसकेको छ / यता फेरी उनैको नेकपा एमाले कै हैसियातामा बैठक चलिरहेको छ।
पार्टी एकता जोगाउन भनेर नेपाल तर्फका घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई लगायत सक्रिय छन् भने ओली तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेलले पहलकदमी लिएका छन् ।
आफ्नो निर्णय नमान्ने नेतालाई पार्टीबाटै निस्कासन गरिसक्दा प्रनि त्यो प्रक्रिया भने हप्ता दिन बढी भैसक्दा पनि रोकिएको छ किनकी ओलिले अझैपनी केही हुन्छ कि भनेर कुरिरहेका छन् । यसरी ओलिले आफू नलत्रने तर आफ्नो दम्भ देखाई नै रहने अनि उता लुकिछिपी आफ्ना मान्छे लगाएर भएपनी अझै एकता गराउने चाल अघि सारेका छन् भने परि आएमा राजालाई दाम चढाउन पनि जाने, परि आएमा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि अघि बढ्ने माधव नेपाल अझै स्याल नितिले काम गर्छ कि भन्ने दाउमा देखिन्छन । माधव नेपाललाई आफूमा बिश्वास छैन्र अझैपनी लतृएर , घुसृएर भएपनी यदि नेकपा एमाले आफूले भनेको जस्तै गरि पहिलेको अवस्थामा फर्कियो भने अझैपनी एमाले मै फर्कन्छु भन्ने दाउमा छन् । यदि त्यसो नभएमा अर्कै पार्टी खोलेर अघि बढ्ने सोचमा छन् । तर, त्यसमा उनी आफैंलाई बिश्वास छैन किनकी अर्को दल खोलेमा आफ्नो पतन हुन्छ भन्नेमा उनी बिश्वस्त छन् ।
अहिले चलिरहेको बैठकमा ओलिले एउटा अचम्मको प्रस्ताव लगेका छन् । त्यो के भने ? यदि आफूले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिने हो भने म कारवाही रोक्छु र फेरि पार्टिमा मिलाएर अघि बढौंला । तर, त्यसको लागि माधव नेपालले सबै आफ्ना नेताहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउनुपर्ने माग राखेका छन् र बैठकमा त्यही विषयमा छलफल भैरहेको छ ।
यहि क्रममा माधव नेपाललाई पनि दबाब छ । उनी निकट बिध्यार्थी नेता लगायत दोश्रो तहका नेताहरुले कुनै हालतमा ओलिसङ्ग नझुक्ने बरु अर्को पार्टी झोल्नुपर्ने अडान अघि सारेका छन् । यसरी नेकपा एमालेमा यस्तै टक्कर अझै लामो समयसम्म भैरहने देखिन्छ ।
वास्तवमा सरकारको अहिलेको कदम देशलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा हुनुपर्ने हो । कोभिड महामारी र लक डाउनले दुख पाएका नेपालि जनताबारे सोचेर सबै नेता एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने हो । भैगो विपक्षिको त कुरै नगरौं , सरकार चलाउने जिम्मा पाएको महान भनिएको प्रधानमन्त्रीको समेत सबै समय आफ्नो र पार्टिको सोच्दैमा मात्र खेर जानुलाई जनताले कसरी बुझ्ने ?
उता जनता अक्सिजन नपाएर, उपचार नपाएर दैनिक भैरहेको छ । देशको नै स्वास्थ्य बिग्रेको बेला जिम्मा पाएका नेताहरुलाई एमालेको र आफ्नो मात्र चिन्तन छ ।
हेर्नुहोस त जुन दिन देखि दुई तिहाई मत पाएर सरकार बन्यो यहि दिनदेखि नेताहरुको किचलो पनि सुरु भयो । अनि त्यही दिन देखि हामिले देखिरहेका छौ। नेताहरु एकआपसमा टक्कर लिनैमा ब्यस्त छन् । जुध्नैमा ब्यस्त छन् । लागेका छन् , ज्यान दिएर लागेका छन् । आफ्नै आफ्नै डम्फु बजाउन । यो तरिकाले न त देश बच्छ न त नेकपा एमाले दल ।
Previous रेशम चौधरी छुट्ने पक्का, यस्तो छ सम्झौता पत्र ( सहमति पत्र सहित )
Next अन्तत : लत्रने नै भए माधव पक्ष , एकता जोगाउन यस्तो सम्झौता भएको माधव पक्ष नेताको खुलाशा